Sida loo rogo ama My Standards DVD Video ka Pal in NTSC
Sidee baan ka Pal beddeli karaa Standards Video inay NTSC
> Resource > Video > Sidee baan u beddeli karaa Standards Video ka Pal in NTSC
Ha aad qabto wax video files in aan dib ugu ciyaaro guul labada of DVD drive iyo ciyaaryahanka DVD standalone aad? Ma jiraan wax fariin qalad gaar ah ay keentay in aad shaashadda? Ma waxa ay ku guuldareysatay inay ku ciyaaraan sababtoo ah video caadiga ah aqlka? Ma martay liiska DVD caadi dhibaatooyin drive ?
Mararka qaarkood, xal u noqon karaan kuwo toos ah. Haddii diinta ka mid ah heerarka video waa waxa aad u baahan doontaa si ay u xaliyaan arrimaha loo maqli karo, ka fiiriyaana ee Converter Video Ultimate . Fadlan raac tutorial hoos ku faahfaahsan oo ku saabsan sida aad u bedeli heerarka video aad ka Pal in NTSC ama bilcaksii.
Talaabada 1: shuban DVD aad (ama ku darto files)
Talaabada 2: files Edit
Talaabada 3: heerarka video Change DVD
Talaabada 4: Change template
Waxaad doonaa si toos ah si toos ah u badalo suuqa kala 's korkiisa bilaabay software ah. Ka hor inta aanad hore u socon, fadlan hubi sida aad jeceshahay doonaa qaab wax soo saarka si ay u noqon; a DVD jirka, file ISO image ama qaab kale oo wax soo saarka, si loo waafajiyo waxaad dalabato.
DVD Jirka ama file ISO image: dhaqaaq badan xagga daaqaddii Gubashada si ay u geliyaan DVD ama jiidi-iyo-hoos u faylasha aad.
Waxaa noocyada kale wax soo saarka: wad uploading aad DVD ama faylasha ee badalo suuqa kala 's.
Tallaabooyinka sixiddiisa faylasha aad aad ula mid yihiin iyadoo aan loo eegayn oo uu furmo suuqa aad ku jirtid. Si fudud u riix Edit icon iyo waxaad heli doontaa galay shaashadda tafatir ah sida hoos ku qoran. Waxaad ku dari kartaa a goo-dhug in ay tirtirto ama sii qaybo in laga soo xulay, dalban Raadka in la shakhsiyeeyo aad video, qabsato dhalaalka , Saturation , la barbardhigo iyo wax ka badan.
Si loo beddelo heerarka video DVD aad ka Pal in qaab NTSC (ama ka NTSC in Pal format), waxaad riixi kartaa More , kaas oo xaq ku xusan button gubatay. Ka dib markii in, ku qaado dejinta ku soo koobin kale ee DVD aad sida shaqi ama DVD ah, heerka tayada (High, Standard ama Low), muuqa iyo sidoo kale haddii aad jeceshahay doonaa in ay DVD jirka ama ah ISO file image at the dhammaadka qaab beddelidda.
Ugu dambeyntii, dooran template aad jeceshahay kuwa la-in la dhisay, la beddelo noocyada, style iyo cabbirka qoraalka iyo codsan sawir ama music in asalka. Ka dib markii in, ku dhufo oo kaliya Gubashada !
Haddii ay wadid aad DVD in aan la shaqeeyo, akhri wax dheeraad ah u gelin Solutions in Your Drive .
NTSC vs Pal - Wax walba oo ku saabsan NTSC iyo Pal
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray AVCHD Videos